Xisbigan Faasidka ah Yaa Miskaha kaga Fadhiya?. | ogaden24
Xisbigan Faasidka ah Yaa Miskaha kaga Fadhiya?.
Xisbigan jinni ee Jigjiga xukuma Yaa baas oo Miskaha kaga fadhiya oo isbeddelkiisa diiddan waa yaabe?
Ma Oromo oo Abiy Axmed hor kacayo ayaa diiddan in xisbigan buuryo qabka ah la xalaaleeyo?
Ma Axmed Shide iyo xertii Heegadaa bakhti afuufmay oo raba in sidiisa loo daayo xisbul-faasidkan?
Ma Ina Cagjar iyo teamkiisaan ilig liiq-liiqanaya ridi karin?
Anigu yaabaye, ma yaabteen? (Haweenay hinaastaybaa laga sheegay).
Hadday Abiy Axmed, Oromo iyo EPRDF diiddan-yihiin nadiifinta xisbigan faasidka ah, dee Mustafa Omer iyo Aadan Faarax dadkay gabeen oo waxay ahayd inay sheegaan cilladda jirta ee maaha inay noqdaan gashaanti aamuskaa lagu meheriyaa.
Hadday ciyaartu u dhaxayso Axmed Shide (Team Heego) iyo Mustafa Omer (Team isbeddel-doon) tanna waa geeri oo maanta Heego Cafis rabta mooyee Heego gor-gortan siyaasadeed gali kartaa inay joogto maba ahayn.
Hadday ciladdu tahay teamka Mustafa Omer oon haan liigaysa lingax ku xidhikarin, dee waaba nasiib-darro tii ugu waynayd oo markaa waxaynu nahay dad sidii ugaadhii maalintiina foofa, habeenkiina meeshii gabalku ugu dhaco waaga berigiisa ku suga (waaba hadduu dugaaggu waaberiga la sugee).
Bye: Ismaciil Cali Ismaciil